Mety hanano sarotra ho antsika ny hifehy ilay valan'aretina raha tsy manaja tsara ireo toromarika napetraka ny Malagasy tsirairay, hoy ny filoha tamin'ny asabotsy hariva lasa teo. Misy koa anefa ireo paika sy teknika entin'ny fanjakana miady manoloana ny fihanak'ilay aretina. Fantatra fa hanofana ireo Malagasy "biologiste" ny Institut Pasteur, hahafahana mampitombo isa ireo mpanao fitiliana eto amintsika ary hovatsiana fitaovana izay hafarana faran'izay haingana izy ireo. 150 hatramin'ny 200 isa isan'andro eo ihany mantsy ny fitiliana vitan'ny Institut Pasteur, ka amin'ny alalan'ny fanofanana ireo "biologiste" Malagasy dia tanjona ny hanatratra fitiliana 500 hatramin'ny 800 isa isan'andro. Hahetsika koa ireo "Clinique mobile" sy "labo mobile" hahafahana manao fitiliana mitety vohitra isam-paritra hoy ihany ny filoha. Nanomboka omaly kosa dia naparitaka any amin'ny hopitaly rehetra hatrany amin'ny faritra ireo fitaovana hahafahana manao fitiliana haingana na "test rapide" hitiliana faran'izay haingana ny olona marary sy mampiseho soritraretina mifandraika amin'ny Coronavirus. Anisan'ny asa lehibe atao ankehitriny ankoatra ireo kosa ny fikarohana ireo olona mety ho nifandray tamin'ilay tera-tany vahiny mararin'ny Coronavirus nivezivezy teto Antananarivo sy ny manodidina. Nomarihin'ny filoha Andry Rajoelina kosa fa mety hiakatra be ny salanisa eto amintsika amin'io herinandro io, raha vao tsy mahafehy tena mihiboka ao an-trano ny Malagasy tsirairay ho fiarovan-tena sy hisorohana ny fiparitahan'ny aretina.